Kuwedzera kwechokwadi kunonakidza Tim Cook: tichazviona munguva pfupi muApple chigadzirwa? | IPhone nhau
Mazuva ano, CEO weApple anga ari parwendo rwekugara rwenyika huru dzeEurope, achishanyira nzvimbo dzakasiyana uko Apple ine huvepo chaihwo kana kutarisira kuva nayo mune ramangwana. Kutambanudza kwekupedzisira kwave kuLondon uko, pamwe nekuita hurukuro neMutungamiriri weBritain, akakwanisawo sangana nesadiq khanmeya weguta. Saizvozvo, akafamba achienda kumahofisi uko kunoitika mutambo unozivikanwa Monument Valley uye ndakave nemukana wekuzvionera wega mashandisiro emamwe matekinoroji eApple munzvimbo dzakasiyana dzekudzidzisa kubva kuguta.
Senge kuti izvi zvaive zvisina kukwana, akapawo nguva yekupa hurukuro kubepanhau Independent, mairi akataura zvakare nezve zvakawedzerwa chokwadi, chimwe chezvidzidzo zvake zvaanofarira munguva pfupi yadarika kana achitaura pachena. Izvo zvichiri kutanga kuziva kana Apple iri padyo nekutiratidza chimwe chinhu zvine chekuita neiyi tekinoroji, asi kana rwizi ruchirira, ndeyekuti mvura iri kutakura uye, sekutaura kwangu, yatonzwika kakati wandei.
Cook akaisa kusimbisa kwakanyanya pahunhu hwekuchinja kweiyi tekinoroji, achienzanisa pfungwa yacho neiyo smartphone pachayo, nekuti "izvo zvinhu zvaigona kuitwa zvaizovandudza hupenyu hwakawanda." Nekudaro, pamwe inonyanya kukosha inowanikwa muchikamu icho chinosiyanisa chakawedzerwa chokwadi kubva kuicho chaichoicho, ichijekesa kuti ndeipi nzira iyo Apple inoda kutora mune izvi.
Ndiri kufara pamusoro pechokwadi chakawedzerwa nekuti, kusiyana neicho chaicho chokwadi, icho chinovhara nyika yekunze, chokwadi chakawedzerwa chinotendera vanhu kuti vange varipo munyika asi, netariro, vachibvumira zviri kuitika munguva kuti zvigadziriswe. Vazhinji vanhu havadi kuzvipatsanura kubva pasirese kwenguva yakareba uye nhasi haugone nekuti unopedzisira wave jaded. Nechokwadi chakawedzerwa unogona, usiri kubatikana mune basa, asi uine zvirinani vhezheni yenyika yako, yehurukuro dzako. Ndizvo zvinoenderana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Tim Cook anofananidza chokwadi chakawedzerwa kune iyo smartphone chimurenga
B & O inotangisa iyo Beoplay H4 neapp yeApple uye Apple Watch